↑ Allott, Anna J. (1981). in Seong Chee Tham: Prose Writing and Publishing in Burma: Government Policy and Popular Practice, Essays on Literature and Society in Southeast Asia: Political and Sociological Perspectives. NUS Press. ISBN 9789971690366။
↑ Watkins, Justin (2007). Studies in Burmese Linguistics. Australian National University. ISBN 9780858835597။
↑ မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန။ မြန်မာစာအဖွဲ့။ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာစာအဖွဲ့&oldid=547223" မှ ရယူရန်
၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၅:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။